Isu takaedza iyo HomeKit-inoenderana Meross smart switch | IPhone nhau
Isu takaedza iyo HomeKit inoenderana Meross smart switch
Luis Padilla | | HomeKit, dzakawanda
Isu takaedza iyo Meross mbiri-nzira switch, inowirirana neKeKKit, Alexa uye Google Mubatsiri, yakakwana yekudzidzisa mwenje mumba mako nekuchinja switch imwe chete.
1 Zvakanakira smart switch
2 Meross maviri-nzira switch
3 HomeKit: Siri, nharaunda uye otomatiki
Zvakanakira smart switch
Kana tichida kutonga mwenje wemba, tinogona kushandura mababu, ayo anogona dzimwe nguva kuva mhinduro yekukurumidza, asi kwete yakachipa kana inonyanya kushanda. Girobhu rakangwara rine zvakawanda zvakanakira, sekureruka kukuru kwekumisikidza, uko kungaitwa nemwana nemaziso avo akavharwa, asi iine kukanganisa kukuru. kana mumwe munhu akadzima girobhu kubva kumain switch, iko kushandisa pamba kwapera.
Kuchinja switch inogona kunge iri mhinduro kwayo ingangoita nguva dzese: uine imwechete yekushandisa iwe unodzora ese mababu ane hukama nayo, ayo anogona kuchengetedza yakawanda mari, uye zvakare hazvina basa kana iwe ukaishandisa kubva kune yako iPhone, iPad, HomePod kana neruoko rwako, yako imba otomatiki ichaenderera ichishanda zvakakwana. Saka zvakakosha kana vadikani vekushandisa pamba uye vachizeza kushandisa mbozhanhare kana izwi kudzima mwenje kugarisana.
Meross maviri-nzira switch
Chii chinonzi switch-way switch? Iyo ndiyo inowanzozivikanwa se switch, ndiko kuti, kana mwenje uchidzorwa nemaviri switch panguva imwe chete, sezvazvinoitika mudzimba zhinji dzekurara nemukoto. Neiyi smart switch kubva kuMeross iwe uchafanirwa chete kuchinja imwe yeaya maswitch kuitira kuti iwe ugone kudzora mwenje mukamuri iro uchishandisa HomeKit.
Nokuda kweizvi chimwe chinhu chakakosha ndechekuti pane tambo isina kwayakarerekera mukuisirwa kwako. Kana pasina, iwe unogona kugara uchizvitora wega kubva padyo rejista bhokisi, chiri chinhu chinongotora maminetsi mashoma, kana kurega nyanzvi yemagetsi ichikuitira iwe kana iwe usingavimbi nehunyanzvi hwako. Paunenge uchinge uine tambo dzakatarwa (zvakakosha kuti utarise kuti dzaive sei mune yekutanga switch uye shandisa zvitambi zvakabatanidzwa mubhokisi kuti uzvizive) zvakabatana neiyo Meross switch uye unogona kutanga maitiro ekugadzirisa.
Kana iwe ukabatanidza tambo nemazvo kumberi LED inotanga kupenya girini uye orenji neimwe nzira, kana zvisiri, tarisa tambo nekuti hauna kuita chinhu nemazvo. Kana kubhenekera kukaitika, iwe unogona ikozvino kuchigadzirisa pamadziro ako uye kutanga iyo yekumisikidza maitiro neKeKKit. Izvo zvakakosha kuti iwe uzive kuti kunyangwe pasina kumisikidza iyo, isina internet, isina WiFi, iwe unogona kugara uchishandisa seyakajairwa switch.
Iyo Meross smart switch ine 2,4GHz WiFi yekubatanidza, saka inongoda yako netiweki yeWiFi kuti usvike mukamuri ine chiratidzo chakanaka, hapana Bluetooth ine zviyero zvezvikamu kana zvimwe zvibvumirano zvinoda kushandiswa kwemabhiriji. Nokubatanidza iyo kune imwecheteyo network yeWiFi seyako HomeKit accessory centre (Apple TV kana HomePod) zvese zvichave zvakagadzirira kushanda.. Zvekubatana iwe unogona kushandisa iyo Meross app (link), iyo zvakare inokupa iwe nhanho-nhanho yekumisikidza gwara kana uine mibvunzo, kana iyo Home app inouya yatove paIOS. Izvo zvinogara zvichikoserwa kushandisa yemugadziri app kana paine firmware zvidzoreso zvekuisa.
Iko Meross kunyorera kunogona kuve kunatsiridzwa. Sezvazvinowanzoitika neveKeKit vanogadzira maapplication, unopedzisira washandisa Kumba pakupedzisira, uye Iwe unosiya iyo yekugadzira app chete kune firmware inogadziridza kuti zvakavhurwa, uye kuti vanokuzivisa iwe Pamba asi kuti iwe unofanirwa kuisa kubva kuchishandiso chaicho cheapp.
Tisati tataura nezve mabasa eKiKit, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuoneka kweshanduro hakugone. Icho chinobatika switch, hapana epanyama mashandiro, ayo mumaonero angu akasununguka uye aesthetically isina chakakanganisika. Iyo yekumberi yakajeka nechena kumashure inoipa iko kwazvino uye kwakanaka kubata, uye isu tinongoona iyo yepakati yakatungamirwa iyo inovhenekera kana mwenje wadzimwa (ine nzira yemanheru yekuidzivirira kana ichikunetsa, izvo zvakaomarara nekuti zvakangwara). Iyo inokwana zvakakwana mubhokisi reyakajairika switch yako uye saizi yakafanana saka hauzoone zvinokwanisika mamaki pamadziro ayo ekare akasiya.
HomeKit: Siri, nharaunda uye otomatiki
Inoenderana neAkiel, Google Assistant neKeKKit… asi isu tichazongotaura nezveKeKKit muchinyorwa chino, nekuti ndizvo zvandinoshandisa kumba. Nei uchiwedzera switch kuApple's home automation platform? Nekuti iwe unenge uine izwi rekudzora kubva chero Apple chishandiso kudzima mwenje uye kudzima, uye nei iwe uchave nekwaniso kumabasa anonakidza senge otomatiki uye nharaunda.
Nharaunda dzinokutendera iwe kudzora mapoka emidziyo panguva imwe chete. Iyo "Husiku hwakanaka" inodzima mwenje wese mumba nekungoti "Usiku hwakanaka" kuna Siri, kana iyo "Mitambo" yekumisikidza inodzima mwenje wedenga uye inodzima matambo e LED muBlue kuti vagadzire mwenje wakasununguka wekuridza husiku .. Automation inogadzira mitemo iyo inobvumidza iwe kudzima mwenje kana munhu wekupedzisira abva mumba, kana kuadzima otomatiki kana zuva ranyura uye munhu wekutanga asvika pamba. Muvhidhiyo ini ndinokuratidza mimwe mienzaniso yezvose zviri zviviri mashandiro. Kwandiri zviri pasina mubvunzo zvinonakidza kupfuura kutonga kwezwi, kunyangwe iyi iri poindi yakakosha futi.
Mushure mekushandisa HomeKit kwenguva yakareba, handina mubvunzo kuti kudzora mwenje wedenga mune imwe imba hapana chinhu chiri nani pane kushandisa switch pamba. Iyi nzira-mbiri yekushandura (kushandura) kubva kuMeross yakakwana pachinangwa ichi, zvinobatsira kuti iwe chete uchinje imwe yeaya maviri switch mumba, uye kuti dhizaini yacho ndeyechizvino uye yakashongedzwa. Kudzora kwezwi, otomatiki, nharaunda ... zvese zvakanakira imba otomatiki ye chete € 26,34 kuAmazon (link)
Mbiri-nzira smart switch
Dhizaini yemazuva ano uye yakanaka
HomeKit, Alexa uye Google Mubatsiri kuenderana
Iwe unongoda kuchinja imwe yeaya maviri switch
Inorerekera waya inodiwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Isu takaedza iyo HomeKit inoenderana Meross smart switch
Zvakanaka mushure mekuimisa, zvinoitika kuti ese maMeross neKumba kunyorera vanongoziva mafambiro akaitwa neye smart switch uye vasinganyore iwo echinyorwa switch, handizive kana paine mhinduro kudambudziko iri, ndatenda uye zvakanaka chinyorwa
Apple AirTags inogona kuita madhora makumi mana
Apple Music Inotangisa Saylist Kubatsira Vanhu Vane Matambudziko Ekutaura